Momba an'i DASQUA - Dasqua
Tany aloha tany am-piandohan'ny taona 1980, rehefa nanomboka nanolotra «calipers masinista» tany Nord Italia i Dasqua, ny ankamaroantsika dia nijery ny 2020 ho avy. Fa eto isika anio! Ny Dasqua manga izao dia heverina ho mariky ny fahamendrehana eo amin'ny sehatra misy antsika. Mampifangaro ny fomban-drazana sy ny fanahy, miaraka amin'ny foibe any Lodi, Italia, ary toerana fanatanterahana fanampiny roa izay hita any Los Angles. (Ho an'i Pan-America), sy Shanghai (ho an'ny faritra Azia), Dasqua dia manompo ny mpanjifa any amin'ny firenena 50 mahery manerantany.
Rehefa nanomboka nanolotra kaliberista masinista tany Nord Italia i Dasqua, ny ankamaroantsika dia nijery ny 2020 ho avy. Fa eto isika anio! Ny Dasqua manga izao dia heverina ho mariky ny fahamendrehana eo amin'ny sehatra misy antsika. Mampifangaro ny fomban-drazana sy ny fanahy, miaraka amin'ny foibe anyLodi, Italia, ary toerana fanatanterahana fanampiny roa izay hita any Los Angles. (Ho an'i Pan-America), sy Shanghai (ho an'ny faritra Azia), dia manompo ny mpanjifa any amin'ny firenena maherin'ny 50 eran-tany i Dasqua. .
Ny folo taona lasa dia nahita fiovana lehibe tao Dasqua. Ary ny valiny dia natsangana tamin'ny alàlan'ny fanatsarana kely. Tamin'ny taona 2008, nandefa ny caliper nomerika azo ampiasaina voalohany eto amin'izao tontolo izao izahay, miaraka amin'ny patanty nomena. Tamin'ny taon-dasa, niova ho fitaovana karbôida farany ho an'ny fihodinana micrometer izahay. Ity karbida vaovao ity dia manolo ny karbida YG6 nentim-paharazana izay ho simba voajanahary, noho izany dia manana antoka azo antoka maharitra isika. Nanomboka nanao tsorakazo ihany koa izahay STAINLESS STEEL kofehy tamin'ity taona ity fa tsy ny vy vy na vy vy karbonika ampiasaina amin'ny fampitana fandrefesana. Ity fanovana ity dia fanavaozana lehibe ho an'ny fivezivezena amin'ny asa-tanana izay olana amin'ny rano na solika. Ireo fanatsarana kely ireo dia mandefa ripples manerana ny indostria misy antsika. Ary ankehitriny izahay dia miasa amin'ny rafitra fampitana data tsy misy tariby manarona fitaovana fandrefesana lehibe, manatsara ny famokarana sy ny fitantanana QC.
Ambonin'izany rehetra izany, na inona na inona takelaka vita amin'ny marbra vita avy any Shina na mari-pamantarana fitsapana diplaoma ho an'ny mari-pahaizana 0,001mm vita eropeana dia hatolotray anao amin'ny avonavona sy fahatokisana ---- raha ny fandrefesana no jerena, Dasqua no mahasamihafa azy ao amin'ny filaharana. Ny filazanay ny soatoavina fototra ary koa ny kolontsainay iraisana efa ela novolena tao Dasqua dia: Marina; Fahamendrehana; Andraikitra. --------- HRR
Manoloana ny fifaninanana mafana sy ny fitakiana takian'ny mpanjifa, dia takatsika tsara fa na dia efa nahazo ireo zava-bita rehetra ireo aza isika, dia eo am-piandohana hatrany io fidinana io. Tsy afaka manakana ny diantsika mihitsy izahay.
Raha manana sosokevitra na hevitra ianao dia aza misalasala manome torohevitra anay. Izahay dia manome lanja izany ho toy ny antony manosika lehibe indrindra handrosoana. Izahay, ao Dasqua, dia hiezaka hatrany hanome antoka fa ny vokatra manga anay no tsara indrindra ho anao tahaka ny taloha, ary amin'ny ho avy rehetra foana!
Ny ekipa Dasqua